January 17, 2018 Rochak Jankaridog, love, monkey
एजेन्सी । धेरैलाई विश्वास नलाग्न सक्छ तर एक बादरलाई कुकुरसँग प्रेम भएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । भारतको महाराष्ट्रमा भएको सो घटना रामदास प्रहरी चौकीको हो । दुवैबीचको प्रेम प्रहरी चौकीमा रहेको सीसीटिभि भिडियोले कैद गरेको छ ।
सिसिटिभिमा कुकरलाई पछ्याउदै बादर पछि पछि लागेको देखिन्छ । रामदास प्रहरी चौकी परिसरमा एक भुसिया कुकुर रहदै आएको छ । केहि वर्ष देखि सोहि परिसरमा एक रुखमा बादर बस्न थालेको हो । चौकी नजिक रहेका मानिसहरु बादर र कुकुरको प्रेम देखेर आश्चर्य पर्ने गरेका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् : बाख्रासंग यौन सम्पर्क । आरोपी भन्छन मैले सोधेरै गरेको !
माता नगरका कमल सिंह कदमले भने ‘बादर र कुकुरबीच प्रेम भएको छ । यदि अन्य कुकुरले सो कुकुरलाई आक्रमण गर्न खोजे बादरले झापुलाई लखेट्ने गरेको छ ।’
दुवैको प्रेम कथा बढ्दै गर्दा वन विभागले भने बादरलाई नजिकैको एक जंगलमा लगेर छोडिदिएको छ ।
ज्योति मगरको अर्को लाजमर्दो प्रस्तुति !
के के हुन् त महिलामा हुनुपर्ने भनिएका ३२ गुणहरु ?